ရုရှားသမ္မတရဲ့ နှစ်ပတ်လည် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
Russian President Vladimir Putin speaks during his annual end-of-year news conference in Moscow, Russia, December 14, 2017. REUTERS/Sergei Karpukhin
ရုရှားအတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် Alexey Navalny သြဂုတ်လတုန်းက အဆိပ်ခတ်ခံရမှုမှာ နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေ စွပ်စွဲသလို ရုရှားအစိုးရ နောက်ကွယ်က ပါဝင်မှုရှိတယ် ဆိုတာ မဟုတ်မှန်ကြောင်းနဲ့ ရုရှားနံမည်ပျက်အောင် အမေရိကန်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှု တစိတ်တပိုင်း အနေနဲ့ Navalny က အမေရိကန်နဲ့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်တာ ဖြစ်ကြောင်း ရုရှားသမ္မတ Vladimir Putin က သူ့ရဲ့ ၂၀၂၀ နှစ်ပတ်လည် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Navalny နဲ့ပတ်သက်ပြီး Bellingcat အွန်လိုင်း စုံစမ်းထောက်လှန်းရေးသတင်း အဖွဲ့က ရုရှားရဲ့. The Insider ၊ Der Spiegel နဲ့ အမေရိကန် CNN သတင်းဌာန တို့ဆီက ရတဲ့ အချက်လက်တွေ ပေါ်မူတည်ပြီး ဒီသီတင်းပတ်ထဲမှာ ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖေါ်ပြထားတာတွေဟာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု မဟုတ်ပဲ အမေရိကန် ထောက်လှန်းရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ တင်ပြချက်တွေကို တရားဝင်အောင် လုပ်ပေးတာသာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သမ္မတပူတင်က ပြောပါတယ်။
သတင်းသမားတွေနဲ့ ရုရှားနိုင်ငံသားတွေရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖြေကြားပေးတဲ့ သမ္မတရဲ့ နှစ်ပတ်လည် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါ ဆိုင်ရာ ကိုင်တွယ်မှု၊ ရုရှားအစိုးရရဲ့ နိုင်ငံ့စီးပွါးရေးဆိုင်ရာ ရုန်ကန်နေရမှုတွေကနေ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး ဆိုင်ရာ အထိ သမ္မတက ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ အမေရိကန် - ရုရှား ဆက်ဆံရေးကို အများဆုံး ပြောကြားခဲ့တာပါ။
နောက်တက်လာမယ့် အမေရိကန် သမ္မတဟာ အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်သူ တဦးဖြစ်တဲ့ အတွက် ပြဿနာတွေထဲက အားလုံးမဟုတ်တောင် တချို့ကိတော့ ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၂၀၁၆ အမေရိကန် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရုရှားက ကြားဝင်နှောက်ယှက်မှု မရှိကြောင်း ဒီစွပ်စွဲမှုဟာ သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကို ယုံကြည်မှု မရှိအောင် လုပ်ဖို့ ကြိုးစားမှု ဖြစ်ပြီး ဒါကိုကြည့်ရင် အမေရိကန်- ရုရှား ဆက်ဆံရေးဟာ အမေရိကန်တို့ရဲ့ ပြည်တွင်းရေးအတွက် ဓါးစာခံလို ဖြစ်နေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
နှစ်ပတ်လည် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ သမ္မတပူတင်ဟာ အခုအချိန်အထိ နိုင်ငံတွင်း လူပေါင်း ၅ သောင်းလောက် သေဆုံးနေပြီဖြစ်တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါ ဆိုင်ရာ ရုရှား အစိုးရရဲ့ ကိုင်တွယ်ပုံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို အများဆုံး ဖြေကြားခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရုရှားအတိုကျအခံ ခေါငျးဆောငျ Alexey Navalny သွဂုတျလတုနျးက အဆိပျခတျခံရမှုမှာ နိုငျငံတကာသတငျးမီဒီယာတှေ စှပျစှဲသလို ရုရှားအစိုးရ နောကျကှယျက ပါဝငျမှုရှိတယျ ဆိုတာ မဟုတျမှနျကွောငျးနဲ့ ရုရှားနံမညျပကျြအောငျ အမရေိကနျရဲ့ လုပျဆောငျမှု တစိတျတပိုငျး အနနေဲ့ Navalny က အမရေိကနျနဲ့ လကျတှဲလုပျဆောငျတာ ဖွဈကွောငျး ရုရှားသမ်မတ Vladimir Putin က သူ့ရဲ့ ၂၀၂၀ နှဈပတျလညျ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
Navalny နဲ့ပတျသကျပွီး Bellingcat အှနျလိုငျး စုံစမျးထောကျလှနျးရေးသတငျး အဖှဲ့က ရုရှားရဲ့. The Insider ၊ Der Spiegel နဲ့ အမရေိကနျ CNN သတငျးဌာန တို့ဆီက ရတဲ့ အခကျြလကျတှေ ပျေါမူတညျပွီး ဒီသီတငျးပတျထဲမှာ ထုတျပွနျလိုကျတဲ့ အစီရငျခံစာမှာ ဖျေါပွထားတာတှဟော စုံစမျးစဈဆေးမှု မဟုတျပဲ အမရေိကနျ ထောကျလှနျးရေးအဖှဲ့တှရေဲ့ တငျပွခကျြတှကေို တရားဝငျအောငျ လုပျပေးတာသာ ဖွဈကွောငျးလညျး သမ်မတပူတငျက ပွောပါတယျ။
သတငျးသမားတှနေဲ့ ရုရှားနိုငျငံသားတှရေဲ့ မေးခှနျးတှကေို ဖွကွေားပေးတဲ့ သမ်မတရဲ့ နှဈပတျလညျ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကပျရောဂါ ဆိုငျရာ ကိုငျတှယျမှု၊ ရုရှားအစိုးရရဲ့ နိုငျငံ့စီးပှါးရေးဆိုငျရာ ရုနျကနျနရေမှုတှကေနေ နိုငျငံတကာ ဆကျဆံရေး ဆိုငျရာ အထိ သမ်မတက ပွောကွားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီအထဲမှာ အမရေိကနျ - ရုရှား ဆကျဆံရေးကို အမြားဆုံး ပွောကွားခဲ့တာပါ။
နောကျတကျလာမယျ့ အမရေိကနျ သမ်မတဟာ အတှအေ့ကွုံ ရငျ့ကကျြသူ တဦးဖွဈတဲ့ အတှကျ ပွဿနာတှထေဲက အားလုံးမဟုတျတောငျ တခြို့ကိတော့ ဖွရှေငျးပေးနိုငျမယျလို့ မေြျှာလငျ့ကွောငျး ပွောပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ၂၀၁၆ အမရေိကနျ ရှေးကောကျပှဲမှာ ရုရှားက ကွားဝငျနှောကျယှကျမှု မရှိကွောငျး ဒီစှပျစှဲမှုဟာ သမ်မတဒျေါနယျထရမျ့ကို ယုံကွညျမှု မရှိအောငျ လုပျဖို့ ကွိုးစားမှု ဖွဈပွီး ဒါကိုကွညျ့ရငျ အမရေိကနျ- ရုရှား ဆကျဆံရေးဟာ အမရေိကနျတို့ရဲ့ ပွညျတှငျးရေးအတှကျ ဓါးစာခံလို ဖွဈနတေယျလို့လညျး ပွောပါတယျ။
နှဈပတျလညျ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ သမ်မတပူတငျဟာ အခုအခြိနျအထိ နိုငျငံတှငျး လူပေါငျး ၅ သောငျးလောကျ သဆေုံးနပွေီဖွဈတဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကပျရောဂါ ဆိုငျရာ ရုရှား အစိုးရရဲ့ ကိုငျတှယျပုံနဲ့ ပတျသကျတဲ့ မေးခှနျးတှကေို အမြားဆုံး ဖွကွေားခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။
လေသံပြောင်းတဲ့ ပူတင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အခြေပြု မိန့်ခွန်း
မြန်မာပဋိပက္ခ နိုင်ငံရေးအရအဖြေရှာဖို့ ရုရှားသမ္မတ တိုက်တွန်း
သမ္မတ Putin ကို ဝန်းရံနေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေအပေါ် ပစ်မှတ်ထားဒဏ်ခတ်ဖို့ ရုရှား အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် တိုက်တွန်း